Manchester City ayaa guul raaxo leh Etihad Stadium kaga gaadhay kooxda West Brom waxayna kooxda Guardiola qarka u saaran tahay in ay kaalinta saddexaad ku dhamaysato xili ciyaareedkan isla markaana ay si toos ah ugu soo baxdo heerka Groupyada Champions Leaque-ga.
Waxaa guushan Manchester City ku hogaamiyay Gabriel Jesus oo heerka gool dhalintiisa cajiibka ah ee Premier Leaque-ga sii wata oo goolka furitaanka dhaliyay halka Kevin De Bruyne oo rekoodh cusub kulankan ka dhigay uu dhaliyay goolka labaad. De Bruyne ayaa noqday xidigii abid ugu horeeyay ee hal xili ciyaareedkan gool caawinta ugu badan ee Premier Leaque-ga u sameeyay Man City. Dhamaadkii ciyaarta Hal Robson-Kanu ayaa West Brom u dhaliyay goolka calanka.
Manchester City (4-4-2): Caballero; Fernandinho, Kompany, Otamendi, Kolarov; Silva, Toure, De Bruyne, Sane; Jesus, Aguero
Kaydka:Gunn, Zabaleta, Fernando, Sterling, Navas, Clichy, Stones
Kaydka: Myhill, K Wilson, Field, Morrison, McClean, Leko, Robson-Kanu
Tababare Guardiola ayaa kulankan waxba la hadhin wuxuuna ogaa in kooxdiisu ay u baahan tahay sidii ay talaabo wayn sarre ugu qaadi lahayd in ay u soo baxdo Champions Leaque-ga isla markaana ay ku sii dhawaato inay kaalinta saddexaad xaqiijisan karto. Guardiola ayaa safkiisa weerarka ku soo wada bilaabay Gabriel Jusus iyo Sergio Aguero wuxuuna shaxdiisa u doortay 4-4-2.
Manchester City ayaa qaybtii hore ee kulankan ahayd kooxda garoonka wax kasta ka samaysay waxayna dhibaato wayn ku abuurtay kooda Tony Pulis ee West Brom oo awoodi wayday in ay wax goolal ah la timaado ama ay si fiican u difaacan karto. Laakiin waqti badan ayay Man City ku qaadatay in ay jabiso difaaca West Brom.
DAQIIQADII 27 AAD Gabriel Jesus ayaa halkiisa ka sii watay duufaanta uu ugu bilwaday xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Premier Leaque-ga inkasta oo uu waqti dheer dhawac ku maqnaa wuxuuna da’yarka ree Brazil kooxdiisa u dhaliyay goolka furitaanka ee ay City kalsoonida ku heshay wuxuuna gacan ka helay boqorka gool caawinta Premier Leaque-ga ee Kevin De Bruyne waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Man City hogaanka ku qabtay.
Kevin De Bruyne ayaa sameeyay gool caawintiisii 16 aad ee horyaalka Premier Leaque-ga ee xili ciyaareedkan, wuxuuna noqday ciyaartoygii abid ugu horeeyay oo Manchester City ka tirsan ee gaadha heerka gool caawintan hal xili ciyaareed oo horyaalka Premier Leaque-ga ah.
DAQIIQADII 29 AAD Manchester City ayaa si deg deg ah ula timid goolkeeda labad ee ay West Brom kaga yaabsatay waxaana markan gool dhaliye isku badalay Kevin De Bruyne oo lahaa hal abuurka goolkii furitaanka, wuxuuna markiisa abaal ka helay Gabriel Jesus oo isna gool caawiye isku badalay iyada oo markan ciyaartu noqotay 2:0 ay Sky Blues hogaanka ku dheeraysatay.
Labada gool ee Manchester City waxaa u dhexeeyay hal daqiiqo iyo 46 ilbidhiqsi oo kaliya. Labadan gool ayaa Manchester City ka caawiyay in ay waqtigii nashada u baxdo iyada oo ku faraxsan in ay shaqo wayn iska sii qabtay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Manchester City iska sii wadatay in ay gacanta sarre ee ciyaarta lahaato waxayna West Brom awoodi wayday in ay dardar saamayn leh la soo laabto.
DAQIIQADII 57 AAD Yaya Touré ayaa kooxdiisa Manchester City u keenay goolka ay ciyaarta hurdada ugu dirtay isla markaana ay West Brom ugu quus goysay kadib markii ay si fiican iskugu xidhmeen Sergio Aguero oo caawinta goolkan sameeyay isla markaana shaqo adag kulankan ka qabtay waxayna ciyaartu noqotay 3:0 ay Citizens hogaanka ugu raaxaysanayso.
DAQIIQADII 62 AAD ayuu Guardiola kaydka uga yeedhay Pablo Javier Zabaleta oo dhawaan si rasmi ah loo xaqiijiyay in uu Manchester City ka baxayo waxaana lagu soo badalay David Silva. Jamaahiirta Sky Blues ayaa si wayn u macasaleemeeyay xidigii waqtiga dheer kooxdooda ka soo ciyaarayay.
DAQIIQADII 87 AAD West Brom ayaa la timid goolka waqtigii uu saamaynta yeelan lahaa ka soo daahay waxaana shaqa nadiifta ah Manchester City iska diiday Hal Robson-Kanu kaas oo kooxdiisa West Brom u dhaliyay goolkan wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3:1 ay Man City wali hogaanka si kalsooni ah ugu hayso.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:1 ay Manchester City saddexda dhibcood kaga tirsatay West Brom isla markanaa ay talaabo wayn sarre ugu qaaday in ay kaalinta saddexaad ku dhamaysato. Man City ayaa 37 kulan ka heshay 75 dhibcood waxayna laba dhibcood ka sarre martay Liverpool.